isikhathi – The Ulwazi Programme
Sike sathi qephu kulengosi yethu ngendaba yezinyanga nanokuthi zaziqanjwa kanjani, kulelikhasi ke sesibheka indaba yesikhathi njengoba esimanjeni sekusetshenziswa izigcina sikhathi, amawashi ngolimu lamangisi. Kulelikhasi sibhunga ngendaba yezikhathi nanokuthi emandulo babazi kanjani ukuthi sekuyisikhathi sini. Sizoqala ngehola leshumi nambili, ngokwesintu sibizwa ngokuthi phakathi namabili. Abadala babebona ngokuphakama kwenkanyezi enkulu ebizwa ngendonsa, indonsa busuku phecelezi. Besekuthi entathakusa … Read more